के तपाईको एलपी ग्याँस सकियो ? तुरुन्त फोन गर्नुस ११४६ ! – Sagarmatha Online News Portal
के तपाईको एलपी ग्याँस सकियो ? तुरुन्त फोन गर्नुस ११४६ !
काठमाडौं । के तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको एलपी ग्याँस सकियो ? यदि सकियो भने, नयाँ ग्यास सिलिन्डरका लागि तुरुन्त फोन गर्नुस नेपाल आयल निगमको टोल फ्रि फोन नम्बरमा । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको बेला देशमा लकडाउन जारी रहेका बेला सहज माध्यमबाट ग्यास लिनका लागी निगमले फोन गर्न आाग्रह गरेको हो ।
निगमले ग्यास चाहिएका उपभोक्ताका लागी हटलाइन नम्बर ११४६ र टोलफ्री नम्बर १६६००११००२८ मा फोन गर्न आग्रह गरेको छ । साथै ग्यासका लागी अन्य नम्बरहरु ९८५१२७३४७९, ९८५१२७३४३१ र ९८५१२७३२६९ पनि उपभोक्ताले फोन गर्न सक्ने निगमले जनाएको छ ।
यता विभिन्न ग्याँस उद्योगहरुले शुक्रबार देशैभर ग्याँस वितरण गरेका छन् । निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित सबै जिल्लाहरुमा वितरण गरिने ग्याँसको विवरण सबै उद्योगले निगममा पठाएका छन् । आज (शुक्रबार) काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ओम ग्याँसले २२ वटा डिपोमार्फत २ हजार ४० सिलिण्डर ग्याँस वितरण गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल ग्याँस कम्पनीअन्तर्गतको नारायणीबाट ४ हजार १ सय ४१ सिलिण्डर ग्याँस देशभर वितरण हुँदैछ । सोही कम्पनीको नेपाल ग्याँस पनि उपत्यकाका ६३ डिपोमार्फत् ६ हजार ४ सय ८० सिलिण्डर वितरण हुँदैछ ।
यस्तै, उपत्यकासहितका विभिन्न जिल्लाका ६ वटा डिलरमार्फत् २ हजार ५ सय ७९ सिलिण्डर एचपी ग्याँस पनि शुक्रबार वितरण हुने निगमले जनाएको छ ।